Tuesday March 26, 2013 - 12:05:43 in Ciyaaro by Super Admin
Qadka daafaca Barcelona ayaa dhawaanahaan liidatay iyadoo daafacyada qaarkood dhaawacyo galeen sida Carlez Puyol halka heer ciyaareedka Gerard Pique uu hoos u dhacayo isla markaana badalkiisa uusna jirin .
Hadaba waxaan warbixintaan ku eegeynaa shanta magac ee Barcelona ka buuxin karta dhibaatada dhanka daafaca .
David Luiz : waxaa lagu tirayaa daafacaan Chelsea daafacyada ugu fiican xiligaan waxa uuna ka ciyaari karaa dhowr boos , waa uuna u qalmaa kooxda Barcelona .
Vicente Company: waxaa lagu tirayaa mid ka mid ah daafacyada aduunka ugu fican , in ay helaan Barcelona waxa ay u muuqataa arin adag waqti xaadirkaan .
Mats Hummels : Daaafacaan Borussia Dortmund waxa uu awood u leeyahay in weeraryahanada hor istaago , waana daafaca ugu dhaw in Barcelona ku biiro xagaaga dambe .
Daniel Agger: dhawaan magaciisa si weyn ayaa looga hadal hayay Spain iyadoo la tilmaamayo in Barcelona dooneyso , waxa uuna leeyahay awooddo difaaceed .
Nemanja Vidic : Barcelona isha ay ku hayaan daafacaan Man United waxa uuna leeyahay awood difaaceed iyo qibrad ciyaareed oo aad u sareeysa.